Docker: Ahoana ny fametrahana ny kinova farany farany amin'ny DEBIAN 10? | Avy amin'ny Linux
Docker: Ahoana ny fametrahana ny kinova farany farany amin'ny DEBIAN 10?
La virtualization ny Operating Systems sy ny Applications na ny Systems amin'ny ankapobeny dia misy ny afaka mizara mitovy amin'izany Hardware, singa maromaro amin'ireo miasa tsy miankina ireo.
Raha resaka virtualisation no resahina Rafitra miasa amin'ny teknolojia maimaim-poana, maimaim-poana ary / na misokatra, ny teknolojia na ny fampiharana matetika no tiana kokoa, toy ny Promox, Xen, VirtualBox, QEMU na KVM. Fa rehefa tonga eo Fampiharana na rafitra, mazàna no ampiasaina matetika Kubernetes na Docker.
Ireto farany 2 dia teknolojia virtualization mifototra amin'ny fitoeran-javatra. Raha ny tranga Docker, Navoaka tao amin'ny taona 2013, ao anatin'ny a fampandrosoana loharano misokatra antsoina hoe Engine docker. Izany dia nanararaotra ny fandrosoan'ny fotoana, izany hoe ny hevitra sy fahalalana momba ny kaontenera hatramin'ny datin'ny Rafitra miasa maimaim-poana sy / na misokatra (Unix / Linux)toy cgroups sy namespaces, handroso amin'ity faritra teknolojia mihombo ity.
Tamin'ny tranga teo aloha dia niresaka momba izany isika Docker, izay no antony tsy hitrandrahantsika ny momba azy, na ny mampiavaka azy, ny fotodrafitrasa misy azy, na ny antsipiriany na ny singa ao aminy. Noho izany, tena hifantoka amin'ny fametrahana ny kinova ankehitriny (19.03.8) amin'ny DEBIANI 10 (Buster) y GNU / Distros Linux, mitovy na mifototra amin'ireny, toy ny MX Linux 19.
Na izany aza, raha mila fampahalalana bebe kokoa dia azonao atao ny miditra amin'ireo bokinay teo aloha Docker.
Ny kinova vaovao an'ny Docker Container 18.09 dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana vaovao
1 Inona no atao hoe fitoeran-javatra?
2 Docker: dingana fametrahana amin'ny DEBIAN 10 (Buster)
2.1 A. Dingana 1
2.2 B. Dingana 2
2.3 C. Dingana 3
2.4 D. Dingana 4
2.5 E. Dingana 5
2.6 F. Dingana 6
2.7 G. Dingana 7
2.8 H. Dingana 8
Inona no atao hoe fitoeran-javatra?
Alohan'ny hanombohana ny fizotry ny fametrahana an'ity teknolojia virtualization mifototra amin'ny fitoeran-javatra, aorian'izay dia afaka mametraka rindranasa na rafitra amin'ny alàlan'ny a "Container", zava-dehibe ny hanazavana azy io amin'ireo tsy dia takatra loatra, ny dikan'ny kaontenera iray.
Mitanisa ny Pejy ofisialy HPE (Hewlett Packard Enterprise) momba ny teknolojia voalaza dia milaza amintsika izao manaraka izao:
"Application Containers dia tontolo iainana runtime maivana izay manome rindranasa miaraka amin'ireo rakitra, miovaova ary fitahirizam-boky ilain'izy ireo mihazakazaka, ka mampitombo ny fahafaha-manaony.".
"Na dia mamela ny fanaingoana ny fotodrafitrasa momba ny informatika aza ireo milina virtoaly nentim-paharazana (VM), ny Containers dia mamela ny fampiharana rindrambaiko. Tsy toy ny milina virtoaly, ny Containers dia mampiasa ny Operating System (OS) an'ny mpampiantrano fa tsy manome ny azy manokana".
Docker: dingana fametrahana amin'ny DEBIAN 10 (Buster)
A. Dingana 1
Omano ny Operating System ho an'ny fametrahana.
B. Dingana 2
Ampidino ny lakile Repository ofisialy, amboary ny Repository ofisialy ary hamarinina ireo fisie azo alaina avy ao, miaraka amin'ny kinova anay GNU / Linux Distro. Ho antsika, DEBIANI 10 (Buster) na hafa GNU / Linux Distro, mitovy na miorina aminy, toy ny MX Linux 19.
C. Dingana 3
Apetraho ny fampiharana ary apetraho ireo rakitra ilaina.
D. Dingana 4
Manamarina ny fametrahana fampiharana, mihazakazaka ny fametrahana ny fitoeram-panadinana antsoina hoe Hello World.
E. Dingana 5
Zahao ny kinovan'ny fampiharana napetraka.
F. Dingana 6
Ity dingana ity dia tsy voatery, satria raha ny tena izy dia ny manamarina fa tsy efa sintomina sy apetraka indray ilay fitoeram-bokatra efa napetraka, rehefa angatahina hitantana azy indray.
G. Dingana 7
Ity dingana hafa ity dia azo raisina ho tsy voatery koa satria mamela a "Mpampiasa tsy mpitantana" afaka mihazona fitoeran-javatra tsy mila alalana "mpitantana". Ho an'ity fandalinana tranga ity dia omena alalana ny mpampiasa efa misy anarana "Sysadmin".
H. Dingana 8
Ary farany, ny zavatra mety indrindra alohan'ny hanombohana hampiasana tanteraka Docker, dia ny mamerina sy manamarina ny fiantombohan'ny serivisy sy ny fanatanterahana ny fitoeram-panadinana.
Aorian'izay, amin'ny famoahana hafa momba ny teknolojia voalaza na mifandraika amin'izany, dia hanandrana ny fametrahana rindranasa na rafitra hafa izahay hanohizana mianatra hahay izany. Na izany aza, ho an'ireo be fampianarana samirery na liana amin'ny fahalianana dia misy boky torolalana tena tsara izay misy fampahalalana bebe kokoa mifandraika amin'izany fametrahana amin'ny DEBIAN GNU / Linux 9/10 ao amin'ny fizarana antontan-taratasy ao amin'ny tranokala ofisialin'ny docker.
Ary farany, raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao Docker, ny fomba fiasa sy ny fampiasana azy amin'ny tena fiainana, azonao atao ny miditra amin'ireo rohy 2 manaraka ireto: RedHat y AWS Amazon.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ity fampiharana tsara sy «Tecnología de Virtualización basada en Contenedores» antso «Docker», izay manome sosona fanampiny abstraction ary mandeha ho azy ny fampiharana virtualization amin'ny maro Rafitra miasa; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Docker: Ahoana ny fametrahana ny kinova farany farany amin'ny DEBIAN 10?
Facebook dia namoaka patch izay manatsara ny Slac memory memory amin'ny Linux
Rebuilderd - Rafitra fanamarinana fonosana binary mahaleo tena ho an'ny Arch Linux